मतदाता कहाँ कति: मोरङमा बढी, सबभन्दा कम कहाँ ? - samayapost.com
मतदाता कहाँ कति: मोरङमा बढी, सबभन्दा कम कहाँ ?
समयपोष्ट २०७४ कार्तिक २० गते २:३३
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा सबैभन्दा बढी मतदाता छन् । निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले १० वटा क्षेत्र रहेको काठमाडौँभन्दा मोरङमा ४१ हजार ३११ मतदाता बढी छन् ।
प्रदेश २ का सबै जिल्लामा चार÷चारवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जहाँ धनुषामा सबैभन्दा बढी मतदाता छन् । धनुषामा चार लाख चार हजार ६७४ मतदाता छन् । आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम मतदाता पर्सामा दुई लाख ८९ हजार ५४ छन् । गोरखापत्रबाट